တတ်နိုင်ဇိမ်ခံကားပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုချီကာဂို, aurora, Rockf သို့မဟုတ် d, ငါ့ကိုအနီးအီလီနွိုက်ပြည်နယ်လေတပ်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု 872-210-5100 ချက်ချင်းကိုးကားအလုပ်အမှုဆောင်စီးပွားရေးအာကာသလေယာဉ်ပျံသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေကြောင်းတနင်္ဂနွေကိုးကားခရီးစဉ်များအတွက်. လေယာဉ်ပျံကနေတဆင့်သင့်ရဲ့လာမယ့်ခရီးသွားဦးတည်ရာဘို့အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နှုန်းထားများမှာ deadhead ရှေ့ပြေးဇိမ်ခံလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကနေအခမဲ့လက်ငင်းကိုးကား Get ခေါ်ဆိုခဆကျဆံ 872-210-5100 သငျသညျအနီး. ချီကာဂိုရှိပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုဝကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်တို့အဘို့အချွေတာခဲ့ကြသည့်အလွခရီးစဉ်အာမခံအတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. ပုံမှန်လေယာဉ်ပျံပေါ်ခရီးသွားလာလေကြောင်းလိုင်း၏မူဝါဒများရန်သင့်အားအားနည်းချက်စေသည်, menu ကိုဆုံးဖြတ်ချက်များ, sea​​ting ဇယားနဲ့ layout ကို, လေယာဉ်အမှုထမ်း, သငျတို့သမျှထိန်းချုပ်ကျော်ရှိသည်သောအခြားအစီအစဉ်များ, sea​​tmates တူ. ဇိမ်ခံလေယာဉ်ငှားရမ်းချီကာဂိုသင်ဤထိန်းချုပ်မှုကျောပေးသည်သငျသညျစုစုပေါငျးထိန်းချုပ်ပေးသည်.
သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာနှင့်မှလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုသင့်အားလပ်ရက်၏တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်ထင်မှတ်ရပါမည်နှင့်ပျော်စရာဖြစ်သင့်. သင်တစ်ဦးလေယာဉ်ပျံလက်မှတ်ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာ, သငျသညျတစျရပျမှအခြားရန်သင့်အားယူသူတစ်ဦးဦးကိုပေးဆောင်ပြန်ဖွင့်, သငျသညျကန့်သတ်ရန်မှပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်အားလုံးခြေထောက်အခန်းနှင့်နှစ်သိမ့်ဖော်ပြခြင်းမ. အစား, သင်လေယာဉ်များ၏ကြာချိန်သည်အသင်တို့၏သက်သာစေရန်ပေးဆောင်သင့်တယ်. သူတို့ပြန်လာကြသည့်တိုင်အောင်လေယာဉ်ပျံဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းသူကလူတွေကသူတို့အိမ်တွေစွန့်ခွာထိုတစ်မိနစ်မှမိမိတို့ခရီးစဉ်ကိုစိတ်ကြိုက်၏အားသာချက်ရှိ. ချီကာဂိုရှိပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ, သင်တစ်ဦးအဆင်ပြေနှင့်သီးသန့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ရှိသည်နိုင်.
အဆိုပါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း: သင်တစ်ဦးတတ်နိုင်ခြေထောက်သဘောတူညီချက်ရနိုင်, ဒါကြောင့်သင်တို့ကကုန်ကျဘယ်လောက်၏ဤဇိမ်ခံစှနျ့ ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလို. ယင်းအထဲက Check တတ်နိုင်ဗလာခြေထောက်သဘောတူညီချက်. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ထဲမှာပျံသန်းမှီနှင့်လက်တွေ့တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. လေယာဉ်ပျံဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းတစ်ဦးထက်ပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အားလပ်ရက်များအတွက်စေမည်. သင်သည်သင်၏ခရီးလမ်းဆုံးမှာကြာကြာနေဖို့ဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ,, မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နေရာဖြစ်သည်အစောပိုင်းကလာသို့မဟုတ်, ရိုးရိုး, တခြားတစ်နေရာသွား. ဒါဟာအမြဲသင့်ခေါ်ဆိုမှုင်.
သင်အလင်းထဲကခရီးသွားလာသို့မဟုတ်ပျံသန်းဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာအရေးမပါဘူး, midsize, လေးလံသော, အလုပ်အမှုဆောင်လေကြောင်းလိုင်းများ, သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသို့မဟုတ်သင်၏နောက်ခရီးပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်တင်တာဘိုပရော့, 24/7. အကြှနျုပျတို့သညျသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးမည်ကိုကူညီနိုငျ (872) 210-5100
ချီကာဂို, Amf Ohare, cicero, သပိတ်ပင်ပန်းခြံ, Berwyn, သစ်တောပန်းခြံ, Elmwood ပန်းခြံ, မြစ်သစ်တော, Lincolnwood, မြစ်ကမ်း, Hines က, Evanston, Maywood, လီယွန်, Harwood မြင့်, မြစ် Grove, Bedford ပန်းခြံ, ထိပ်သီးအစည်းအဝေး Argo, Broadview, Melrose ပန်းခြံ, Brookfield, ဇာတိမြို့, Skokie, အမြဲစိမ်းပန်းခြံ, Burbank, Bellwood, la Grange ပန်းခြံ, ကျောက်ခေတ်ပန်းခြံ, Franklin ဟာပန်းခြံ, Westchester, သပိတ်ပင်မြက်ခင်း, Bridgeview, Schiller ကပန်းခြံ, Morton Grove, တောငျကုနျး, ပန်းခြံ Ridge, ကြောကျ, တရားစီရင်ရေး, la Grange, ဘာကလေ, Wilmette, ချီကာဂို Ridge, ဂေါက်သီး, အနောက်တိုင်း Springs, Hickory Hills, Kenilworth, Alsip, တန်ဘိုး, Elmhurst, des Plains, အဖြူ, အပြာရောင်ကျွန်း, မိုးမခ Springs, Hinsdale, Palo Hills, Riverdale, Glenview, Winnetka, Glenview NAS, Bensenville, သပိတ်ပင် Brook, Robbins, Palo မြင့်, Techny, ဗီလာပန်းခြံ, Posen, Dolton, Willowbrook, Clarendon Hills, Midlothian, သစ်သား Dale, Glencoe, Hammond ဟာ, Palo ပန်းခြံ, Westmont, Harvey, Addison, အရှေ့ချီကာဂို, Calumet စီးတီး, Lombard အဘိဓါန်, Northbrook, တောင်ပိုင်းဟော်လန်, တောင်ပေါ်က Prospect, သပိတ်ပင်သစ်တော, Darien, ဆတ် Grove ကျေးရွာ, Downers Grove, Orland ပန်းခြံ, Itasca, Hazel မောက်, အလားအလာကိုမြင့်, Thornton, Glen Ellyn, Arlington မြင့်, Medinah, လန်စင်း, အဘိဓါန် Highland ပန်းခြံ, Homewood, Country Club Hills, Lemont, wheel, လင်းဒေးလ်ဟိုက်, Woodridge, Tinley ပန်းခြံ, Deerfield, Bloomingdale, Glenwood, ဂယ်ရီ, Flossmoor, Lisle, ရောဂါ, Rolling Meadows, Roselle, Highwood, Schaumburg, Wheaton, ဝိန်း Fort Sheridan, အဘိဓါန် Highland, Olympia Fields, ချီကာဂိုမြင့်, Bolingbrook, Carol Stream, Lincolnshire, ကျွဲ Grove, Palatine, Winfield, Matteson, Griffith, Hanover ပန်းခြံ, Mokena, ရေကန်သစ်တော, Naperville, ဟော့ဖ်မန်း Estates, ဒိုင်ယာ, Richton ပန်းခြံ, Lockport, Bartlett, Frankfort, ပန်းခြံသစ်တော, Steger, Schererville, ရေကန်ဘူတာ, Warrenville, Romeoville, long က Grove, အနောက်ချီကာဂို, Streamwood, Vernon Hills, Fox ကချိုင့်, ရေကန်ဖြီး, ကရေတေ, နယူး Lenox, ရေကန်ဇူးရစ်, ဟိုဘတ်, Saint John, Portage, Merrillville, Barrington, ဂရိတ်, Eola, ဝိန်း, Joliet, Libertyville, Mone, မြောက်အမေရိကချီကာဂို, Mundelein, aurora, Elgin, စိန့်ချားလ်စ်, လိန်းဖီးလ်ဒ, ဘာတာဗီးယား, ဝီ, Crown Point, Chesterton, ပလေတိုရေးစင်တာ, Waukegan, ဂျီနီဗာ, တောင်ပိုင်း Elgin, မြောက်အမေရိက Aurora, Mooseheart, Beverly Shore, Carpentersville, အာရဇ်ပင်ရေကန်, Dundee, Beecher, Fox ကမြစ် Grove, မန်ဟက်တန်, Wauconda, Montgomery, Gurnee, Grayslake, Leroy, Valparaiso, Oswego, cari, Peotone, Lafox, Wasco, Elwood, ကျွန်းရေကန်, Algonquin အဘိဓါန်, မီချီဂန်စီးတီး, Gilbert, Wadsworth, ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာ, round ရေကန်, Bristol က, တောင်၌ရေကန်, ရေကန်ဗီလာ, Channahon, သကြား Grove, ဝင်သရော့ဖ်ဆိပ်ကမ်း, Elburn, crystal ရေကန်, Ingleside, Boon Grove, လိုဝယျလျ, Westville, Minooka, Grant ကပန်းခြံ, ဟေဗြုန်မြို့,, Yorkville, Mchenry, Manteno, Huntley, Fox ကရေကန်, နယူး Buffalo, သာယာသော Prairie, Kaneville, Hampshire ပြည်နယ်, အန္တိအုတ်မြို့, Big ရော့ခ်, ဝီလ်မင်တန်, Kenosha, ဘာလင်တန်, Laporte, မေပယ်ပန်းခြံ, Plano, ပြည်ထောင်စုဆိပ်ခံတံတား, Benet ရေကန်, နွေဦး Grove, Schneider, Ringwood, က Lakeside, Shelby, WANATAH, အံ့သြစရာရေကန်, Sumava Resorts, Bourbonnais, Trevor, Momence, Bristol က, Woodstock, Millbrook, Kouts, စခန်းရေကန်, Harbert, Bassett, ပြည်ထောင်စု, ယော, Wilmot, Newark, Bradley, Braidwood, Hinckley, Somers, ပြည်ထောင်စု Mills က, ကျောက်မီးသွေးစီးတီး, သုံးသပိတ်, Demotte, Richmond, မောရစ်, Roselawn, ဆန်းဒဝစ်, Silver, ရေကန်, Sawyer, လမ်, Kingsbury, အမွှာရအေိုငျမြား, Kankakee, Millington, Cortland, ရေကန်ကျေးရွာ, သဖန်း, Woodworth, Rolling Prairie, Braceville, Bonfield, la Cross, Bridgman, Marengo, နယူး Troy, Hopkins ပန်းခြံ, Kingsford မြင့်, Essex, အနံ့ပန်းခြံ, Hanna, ဂျီနိုအာ, Somonauk, အင်အားကြီးရေကန်, Wheatfield, Dekalb, ဂျီနိုအာမြို့, နယူးရောဂါ, Racine, Tefft, ဟေဗြုန်မြို့,, စိန့်အန်း, Sturtevant, Pell ရေကန်, Stevensville, Galien, တောင်ပိုင်းဝီလ်မင်တန်, Waterman, တရားမျှတသောသပိတ်, Sheridan, Mazon, Baroda, ပြည်ထောင်စုဟေးလ်, နယူး Carlisle, ကြိတ် Creek အဘိဓါန်, Gardner, Kingston, ပြည်ထောင်စု Grove, Alden, စန်း Pierre, စိန့်ယောသပ်သည်, Kansasville, Zenda, Leland, Reddick, Herscher, Hamlet, Chebanse, ဥယျာဉ်တော် Prairie, Clare, ဟားဗတ်, Beaverville, Benton ဆိပ်ကမ်း, ဘာလင်တန်, Serena, Papineau, Seneca, Shabbona, Verona, မော်လ်တာ, Franksville, ဘာကင်ဟမ်, မြောက်အမေရိကယုဒသန်, ရေကန်ဂျီနီဗာ, မော်ရိုကို, Buchanan, လီယွန်, Walkerton, Kirkland, Wedron, ပြစ်ဒဏ်များ, Springfield, Fontana, မာဆေး, Berrien Springs, Williams ဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, တောင်ပေါ်က Ayr, Rochester, မြောက်အမေရိက Liberty, Walworth, Knox, ကယ်လီဒိုနီးယား, Clifton, Martinton, Capron, Belvidere, Medaryville, Lee က, Dwight, Creston, ပေါက်ဘော်တယောက်, Grovertown, ပရဝုတ်, Rensselaer, Earlville, Cabery, Esmond, Waterford, ဒိုနိုဗန်, တောင်ပိုင်းကွေးပါ, Eau Claire, သပိတ်ပင် Creek အဘိဓါန်, ပေါ့ပလာပင် Grove, Berrien ရေးစင်တာ, ဖောဖော, Coloma, ရှာရုန်, သငေ်္ဘာအိုးသူကြီး, Ashkum, Donaldson, ကြောကျ, ခြောငျးငယျ, ဟာဂရ Shore, ချယ်ရီချိုင့်, ရွေးနုတ်ဖိုး, Tyner, တောင်ပိုင်း Milwaukee, အော့တဝါ, မွန်ရိုးရေးစင်တာ, Lindenwood, Franklin, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတကတော်, Iroquois, Emington, Delavan, Francesville, Rockf သို့မဟုတ် d, Kempton, Rochelle, Elkhorn, Watervliet, Lakeville, ယခု, Lapaz, အရှေ့ Troy, Cudahy, Muskego, ကယ်လီဒိုနီးယား, အောင်ပွဲ, Compton, Greendale, Danforth, Big ကွေးပါ, Milwaukee, Darien, ဂရန်း Ridge, Watseka, လျှို့ဝှက်, Hale ထောင့်, Odell, Davis ကလမ်းဆုံ, Holcomb, Monterey, Mishawaka, Winamac, Kentland, Plymouth, Cullom, Mukwonago, Sheldon, Blackstone, Culver, ပန်းခြံကိုချစ်သောသူ, ကလင်တန်, Granger, လခြမ်းစီးတီး, Dowagiac, Hartford, Goodland, အနောက်ဘရွတ်ကလင်း, Mendota, Gilman, ဥတီဂ်, Machesney ပန်းခြံ, Saunemin, နယူးဘာလင်, Wyatt, Roscoe, Troy Grove, တောင်ပိုင်း Haven, ပိုက်ဆံ, Avalon, Streator, Woodland, Piper စီးတီး, Ashton က, Bremen, Remington, လင်းယုန်ငှက်, Stillman ချိုင့်, ကုလားပဲ, Osceola, Waukesha, တောင်ပိုင်း Beloit, မြောက်အမေရိက Prairie, Earl ပန်းခြံ, ကော်နဲလ်, ကြှဲ, Edwardsburg, Onarga, ဘန်ဂေါရ်, Bangor, la Salle, စပယ်ယာ Ford ကား, Delong, Wolcott, Oglesby, Elm Grove, Beloit, Rockton, Leonore, ကြယ်စင်မြို့တော်, Palmyra, Chatsworth, Brookfield, Cassopolis, Lee ကရေးစင်တာ, Argos, လောရင့်, Glenn, Wakarusa, Byron, Sublette, Ancona, ပီရူး, Tonica, Whitewater, Decatur, Pontiac, Franklin Grove, ဝေလနယ်, Breedsville, Elkhart, Genesee Depot, Lacota, မြက် Creek အဘိဓါန်, Thawville, ချယ်ရီသီး, Milford, Reynolds, Dalzell, ဖောရက်စ, Winnebago, ဘဏ္ဍာစိုး, Stockland, la ဆီးတား, အာရဇ်ပင် Point သို့, Kewanna, Arlington, ဖြည်းဖြည်းချင်း, အော်ရီဂွန်, Ladd, Bourbon, Janesville, Amboy, Pewaukee, Monticello, ဂရန်းလမ်းဆုံ, long ကပွိုင့်, Talbot, မုဆိုး, Goodwin, Shirland, နွေဦးချိုင့်, Nappanee, Delafield, Vandalia, Hanover, Afton, Pullman စ, စံ, Lostant, Nachusa, ဒေါက်ဂလပ်, Idaville, Tippecanoe, Fairbury, Graymont, Menomonee ရေတံခွန်, Claytonville, Buckley, Rochester, Seatonville, ရောဘတ်, ဗန် Orin, Fennville, Eldena, တော်ဝင်စင်တာတွင်, မီလ်တန်, Seward, Lannon, Cissna ပန်းခြံ, Sussex, Chalmers, Etna အစိမ်းရောင်, အရွက်မြစ်, Wenona, Saugatuck, Bloomingdale, ဖောဖော, Wellington, Sullivan က, Pecatonica, Granville, ပြည်ထောင်စု, အမှတ်, Strawn, Flanagan, တောင်ပေါ်ကမောရစ်, Nashotah, helenville, Merton, ဂျုံးစ်, Hartland, ဒါန, Durand, Burnettsville, Thiensville, Lawton, Bristol က, Depue, Malden, Lucerne, Okauchee, ဂေါရှင်, Dixon က, Marcellus, ရေကန် Cicott, mc Nabb, ဝိန်း Fort Atkinson, RUTLAND, Mequon, Oconomowoc, ဒိုဗာ, Germantown, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, Fulton, Macatawa, Atwood, အေသင်, Boswell, Yeoman, အောက်စဖို့ဒ, Chenoa, Brookston, နယူးပဲရစ်, Loda, Melvin, Colgate, Milford, Magnolia, Hennepin, Mentone, ဂျက်ဖာဆန်, Templeton, ဂျာမန်ချိုင့်, Footville, Sibley, Kasbeer, Orfordville, Gobles, ဗျူရို, Hubertus, Cropsey, ဗက်လင်မြို့, Mattawan, Ridott, Davis က, Minonk, မြောက်အမေရိကရေကန်, Edgerton, မှာရှိတဲ့တိုလူကာ, Princeton, Burket, ဟော်လန်, Richfield, Burrow, တကျိပ်နှစ်ပါးသောရတနာမိုင်, Otterbein, ရော့ခ်စီးတီး, Akron, Montmorenci, Kendall, Lawndale, Hamilton က, ဂျွန်ဆင် Creek အဘိဓါန်, Allegan, Macy, Ixonia, Varna, စစ်တိုက်မြေပြင်, Logansport, Gridley, ဝါဆော, ကျောက်ဆူး, Delphi, Ashippun, Brodhead, Leesburg, Rockfield, အဆိုပါနှင်းဆီ, Putnam, Deedsville, Colfax, Winona ရေကန်, Claypool, Benson, ဟင်နရီ, Lexington, Evansville, ကိန်းဘရစ်ချ်, Tiskilwa, Watertown, ကန်ဒန်း, ရေကန် Mills က, အနောက်သံလွင်, Silver, ရေကန်, ခေါ Creek အဘိဓါန်, အလွန်, Zeeland, Denver, နယူး Waverly, မက္ကစီကို, အယ်လ် Paso, Lacon, လေဗနုန်တော, Washburn, Cooksville, Stoughton, ဂရန်း Haven, အယ်လ်ဘာနီ, လမ်, Roann, Flora, Hopkins, ရော့, Burnips, ဝေါ်လ်တန်, Deerfield, Secor, ထိုနောက်, Hudson, Ferrysburg, Towanda, Sparland, Bringhurst, နွေဦးရေကန်, Laketon, Dorr, Grissom Arb, ပီရူး, Merna, ဘရွတ်ကလင်း, လူငယ်တို့အမရေိ, Lowpoint, Waterloo, Hudsonville, မြောက်အမေရိကမန်ချက်စတာ, ဂျိမ်းစ်တောင်း, Galveston, အိမ်တွင်း Grove, Muskegon, အော်ရီဂွန်, mc Farland, Allendale, မာရှယ်, Nunica, ဘာလင်တန်, Fruitport, ယူရီကာ, ဘန်ကာဟေးလ်, Jenison, Chillicothe, သာမန်, Carlock, မိုင်ယာမီ, Lamont, Metamora, Madison, ရောမမြို့, Grandville, Coopersville, Congerville, Wabash, Goodfield, နေရောင် Prairie, Marne, Kokomo, Danvers, သမင်ဒရယ် Creek အဘိဓါန်, ဝါရှင်တန်, Amboy, Somerset, Ravenna, Conklin, ဝင်ဆာ, Mackinaw, conversation, Middleton, က de သစ်တော, Morton, Waunakee, Greentown, Morrisonville, Casnovia, Sweetser, Swayzee, ဘေလီ, Tremont